China ABS Automatic Sensor Soap DispenseFG2002 orinasa sy mpanamboatra | Feegoo
Dispense savony savony sensor automativa ABSGGG222
Material: Plastika ABS Product habe: 110x275x106 (MG)
Iray / Fotoana iray: 1 ~ 1,5 CC Fonosana fonosana: 155x300x140 (MG)
Fahafaha-manao: 1000 CC Fonosana: 585x480x340 (MG)
Karazana fahatsapana: Infrared tsy misy tohiny GW / NW: 0.7kg / 1.0kg
1. Fahadiovana: mpizara savony fandroana vita amin'ny rindrina ao anaty rindrina infrared mandeha ho azy, madio kokoa noho ny mpaninjara savony amin'ny tanana.
2. Tsy tantera-drano — dispenser vy tsy misy vy ao anaty ao ireo singa elektronika rehetra dia voaisy tombo-kase mba tsy hialana amin'ny rano.
3. plastika ABS miady amin'ny bakteria, ampidirinay mpiasan'ny bakteria ao anaty plastika ABS, io fiatraikany io dia mety hahatonga ny akoran'ny plastika ABS hanana fahaizana manakana ny fitomboan'ny bakteria.
4. Ny faritra Independent-Container assembling sy ny dispenser dia 100% azo sarahina. Ka io mekanisma io dia afaka amin'ny fahasimban'ny savony. Toekarena - savony iray monja navoaka avy amin'ny dispenser tsy misy tanana, mikoriana mifehy ary misoroka ny fihoaram-pefy.
5. Tondro LED — Mena amin'ny asa ary twinkling ho an'ny bateria ambany. Ny jiro famantarana dia afaka mampahatsiahy ireo mpiasan'ny fikolokoloana hanolo ny ranoka na batery ara-potoana, izay manan-tsaina kokoa.
6. Fahafahana lehibe — dispenser ranon-javatra 1000ml, mora ampiana. Mpanaparitaka savony lehibe afaka mampihena ny ora fikojakojana ny mpiasa hikarakara.
7. Famolavolana hidin-trano fiarovana fiarovana amin'ny laoniny, mahery ny asany, mamonjy herinaratra.
Famolavolana varavarankely mangarahara azo jerena
Amin'ny alàlan'ny varavarankely mangarahara, dia afaka mandinika ny habetsaky ny rano ao anaty tavoahangy dispenser savony mba hahafahan'ny mpiasa misahana ny fikojakojana manampy ranon-javatra ara-potoana.
Fisehoana lamaody sy tsara tarehy, plastika ABS misy bakteria manakana ny fitomboan'ny bakteria
Famolavolana lakile vy tsy manam-paharoa ， Fisorohana ny ankizy amin'ny alàlan'ny fanararaotana ary fanodikodinam-bola amin'ny toerana imasom-bahoaka
Mora manampy ny masonkarena
Sokafy ny casing vy tsy misy fangarony savony ary sokafy ny fonon'ny kettle. afaka manampy ilay ranoka mivantana.
Fiarovana roa, ny kettle ao anaty masinina dia tsy hangalarina.
Previous: Abs Sensor Sensor Oem Soap Dispenser Fg2019
Manaraka: Mpamaritra taratasy miaraka amin'ny savony savony Sensor mandeha ho azy FG1001
Dispenser savony mandeha ho azy Dc
Dispenser savony manokana
Dispenser savony tanana
Mpanome savony tanana
Dispenser savony miorina amin'ny rindrina
Latabatra fanovana zazakely amin'ny fehin-tànana fiarovana FG1688
Fanamainana mandeha ho azy Electric Jet FG9988H
Stainless Steel Wall nitaingina taratasy Dispenser Fo ...
Low Noise tanana fanamainana FG1000
Stainless Steel Wall nametaka taratasy Dispenser FG ...
Famonoana savony tsy misy fangarony vy mandeha ho azy ...